မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ၁၉ ဇူလိုင် *********
၁၉ ဇူလိုင် *********
( ၁ ) ဦးဘဝင်း * လောကမှာ ကျွန်တော်မနာလိုဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က ခင်ဗျားပဲ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ မွေးချင်းတော်စပ်ခွင့်ရတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကို အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးခွင့်ရတယ် နောက်ဆုံး ဗိုလ်ချုပ်နဲ့အတူ သေဆုံးခွင့်ရတယ် ထူးလိုက်တယ့်ကံ ခင်ဗျားရင်ထဲက ကျည် ၈ချက် ကျွန်တော်တို့ ခံစားရခက်နေတုန်းပဲ …
( ၂ ) ဦးအုန်းမောင် * ကံဆိုးတာလား ? ကံကောင်းတာလား ? တိုင်းပြည်အရေးအတွက် ငါးမိနစ်စောဝင်ခဲ့ပေမယ့် ကျည်ဆန်တွေက ခင်ဗျားကိုယ်ထဲကို နစ်ဝင်ခဲ့ရပြီ ခင်ဗျားရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း စာရွက်ကြီး သွေးကွက်တွေထဲမှာ ခုထက်ထိ . . . …
( ၃) ဦးရာဇာတ် * အပစ်ခံရတာချင်းအတူတူ ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ သခင်မြကိုအရင်ကြည့်ပါ ကျွန်တော်က အရေးမကြီးပါဘူးတဲ့လား ! ခင်ဗျားစကားတစ်ခွန်းက ခင်ဗျားဘယ်လောက်အရေးကြီးကြောင်းပြောသွားတယ် တောင်းပန်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဗိုလ်ချုပ်ကိုအသက်မမှီလိုက်ဘူး …
( ၄ ) ရဲဘော်ကိုထွေး * ရာထူးမရှိပေမယ့် သွေးမနည်းပဲ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တိုင်းပြည်တာဝန်ကို ရရာထောင့်က ကူညီခဲ့တယ့်သူ နောင်လူငယ်တွေ ပြောပြရမယ် အသက် ၁၈ လည်း အာဇာနည်ဖြစ်နိူင်တယ်ဆိုတယ့်အကြောင်း …
( ၅ ) မိုင်းဘွန်စော်ဘွာကြီး စပ်စံထွန်း * သိပ်ခန့်တယ့် ရှမ်းစော်ဘွားကြီး ငယ်ငယ်က ပေါင်ပေါ်မှာကြောင်ရုပ်ထိုးမိကာ အခုရှက်နေရလို့ လူငယ်တွေ ဆေးမှင်မထိုးပါနဲ့ဆိုတဲ့စော်ဘွား ကျွန်တော်တို့ နှလုံးသားမှာ သူ့နာမည်တက်တူးထိုးသွားပြီ …
( ၆ ) ဒီးဒုတ်ဦးဘချို * ကလောင်နဲ့ကော လူကိုယ်တိုင်ကော တိုင်းပြည်ကို ရှိသမျှခွန်အားနဲ့ ကယ်ဆယ်ခဲ့တဲ့ဆရာ အဲ့သည့်ဦးနှောက်ကို ကျည်ဆံတွေဖောက်ခဲ့တယ် တိုင်းပြည်အတွက် ဆုံးရှုံးနစ်နာမူ့ကြီး ကျွန်တော်တို့အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိူင်တ့ လူသားစစ်စစ်တစ်ယောက် … ( ၇ ) မန်းဘခိုင် * ဗမာတွေ လက်အောက်ရောက်တာဟာ တိုင်းတပါးလက်အောက်ရောက်တာထက် အများကြီးသာသေးပါတယ်လို့ ကရင် - ဗမာ ချစ်ကြည်ရးပျက်ပြားအောင် သွေးထိုးတဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေစကားကို တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ ဖထီး …
( ၈ ) သခင်မြ * 1947 july 19 ဒီနေ့မှ ထမင်းခပ်သုတ်သုတ်စားတာ ထူးဆန်းချည်ရဲ့ဆို အိမ်အထွက် ခြံတံခါးနဲ့ ဂျစ်ကားညှိတော့ ဇနီးက မသွားပါနဲ့လား ဆိုတာကို တချက်ပြုံးလို့ " ဗိုလ်ချုပ်စောင့်နေလိမ့်မယ် " တစ်ခွန်းတည်းနဲ့ တစ်သက်တာလုံးနူတ်ဆက်သွားခဲ့တယ့်သူ ကျွန်တော်တို့အခု … ဘယ်လိုရင်ဘတ်နဲ့ အငိုတိတ်ရမလဲဗျာ … … … …
( ၉ ) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း * တစ်မျိုးသားလုံးအရေးကို ရင်ထဲထည့်ခဲ့တယ့်ဗိုလ်ချုပ် ငါပြည်သူအနွေးထည်မဝတ်နိူင်တာဟာ ငါ့အပြစ်လို့ဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ် သားကိုတွေ့ချင်လွန်းလို့လာတဲ့ မိခင်ကို တိုင်းပြည်အရေးကြောင့် မချစ်ချင်ယောင်ဆောင် မိခင်အိမ်အပြန်ရထားထွက်တော့မှ စင်္ကြန်မှာ ဒူးထောက်ရှိခိုးရင်း ငိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ် သူ့နှလုံးကို အကျဉ်းချပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံး လွတ်လပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ့်ဗိုလ်ချုပ် တစ်ဘဝလုံး စတေးခဲ့ပေမယ့် ဇူလိုင် ၁၉ မှာ ပြန်ရခဲ့တာ ကျည်ဆန် ၁၃ ချက် . . .
မေးပါရစေ . . . တန် … လို့ … လား … ဗိုလ်ချုပ် … … … ?
Credit - Ulay Kyi ( ကိုလင်း)
Author MSSK at 6:26:00 PM